दूर्जेय चेतना: अनि प्रश्न उठ्छ!!!
Browse » Home » कथा , लेख/रचना » अनि प्रश्न उठ्छ!!!
6 comments to “अनि प्रश्न उठ्छ!!!”
पहीले को ? मन वा मान्छे ?
मन होला शायद ।
तपाइको मन निकै जलेको रहेछ .....
निकै गहिरो भावमा डुब्नु भएको छ ! लाइन नै पिच्छे शब्दको झटारो हान्नु भा'छ !
दूर्जेय जी .... अनुतरित प्रश्न ???? (म मौन नै बसे )
माथिको आलेख र तलको कवितालाई जोडेर हेरेँ, खोइ सम्बन्ध नै फेला पार्न सकिनँ ।
र पनि प्रश्न गराइ मन पर्‍यो । मन कि मान्छेको प्रश्नले धेरैको दिमाग यो सृस्‍टि रहुन्जेल नै चक्कराउला, तर मनको रफ्तारलाई उछिन्न मान्छेले कहिले पो सक्ला र, चाहे जल्ने कुरामा होस् या चल्ने (गति) कुरामा ।
कविताले रस पोख्यो। मन या मान्छे ? आरम्भ संगै लागेको पुर्णबिराम सम्म आइपुग्दा घोत्लियो मन र मान्छेको दौडाइमा । भावले भौतिकतालाई नै जिते जस्तो लाग्यो तर भौतिकता बिना भाव कसरी सिर्जना होला ? प्रश्न आफैमा जटिल छ।
मभित्र पनि यस्ता प्रश्नहरु धेरै उठ्छन र सेलाउछन, अनुत्तरित प्रश्नहरुका खातैखात हो मान्छे, एउटा मान्छे -दुर्जेय चेतना ।
विचारोत्तेजक लेख | मन बदलिरहने तर मान्छे भने लगभग उस्तै भै रहने हुनाले मान्छे नै पहिला पो हो कि,रिफरेन्स फ्रेमको रुपमा ? अझै बहस जरुरी छ|